Iyo Surface Laptop Go ndeyekutanga laptop pamutengo wakaderera pane waungatarisira asi haisi yakanakisa bhajeti laptop yaunogona kutenga
Pros Akanaka dhizainiExcellent kuratidzaFingerprint muverengi uye Windows Mhoro webcamMhando yakachipa kwazvo ine chete 64GB yekuchengetedza uye 4GB ye RAM
Kwete kare kare, ini ndaiti kana iwe ukashandisa £ 500 kana zvakadaro palaptop, iwe unowana izvo zvawakabhadhara: muchina unoshanda asi mumwe wainonoka uye wakasungwa mukugadzirwa. Muna 2020 iri kutanga kuchinja uye Microsoft Surface Laptop Go imwe yemafungu matsva anoshanda, anokwezva malaptop haufanire kushandisa pamusoro pe1,000 pondo kuva yako.
Nemitengo inoyedza yakaderera uye dhizaini isiri kure kure neiyo yepamusoro Surface Laptop 3, iyo Go ndeye laptop inoisa zviyero izvo zvese zvenguva yepakati-renji ultraportables zvakagadzirirwa kutongwa. Kana uine dzakatenderedza £ 700 yekushandisa palaptop nyowani, iwe uchave upenzi kuti usazviwedzera kune yako pfupi pfupi.
Microsoft Surface Laptop Endai ongororo: Izvo zvaunofanira kuziva
Iine iyo Surface Laptop Go, Microsoft yatora hunyanzvi hwekugadzira iyo yawakagadzira pamusoro pemakore kubva kuvaka kwayo Surface nhevedzano yemidziyo uye ndokuiunza kune yakaderera mutengo poindi.
Iyo ine yakanakisa 12.4in 3: 2 factor ratio PixelSense touchscreen (saizi yakafanana uye chimiro sekuratidzwa pane iyo Surface Pro 7) uye mutete, wakavakwa-naka muviri uyo waisazove uri munzvimbo mune laptop inotengwa pa £ Chiuru chimwezve.
Kazhinji pamutengo uyu, kuti uwane muchina wakanyatsogadzirwa unofanirwa kupira chimwe chinhu mushe mushe uye ndizvo zvazviri neshanduro yakachipa pane yeSurface Laptop Go sezvo ichingova ne64GB yeMMC yekuchengetera uye 4GB ye RAM. Nekudaro, simudza kumusoro uye mutengo unogara unonzwisisika uye zvibairo zvacho zvakanyanyisa.
Microsoft Surface Laptop Go Ultra-Mutete 12.4 ”Kubata Screen Laptop (Sandstone) - Intel 10th Gen Quad Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD, Windows 10 Imba muS S Mode, 2020 Edition
Microsoft Surface Laptop Go: Mutengo nemakwikwi
Mitengo yePuratifomu Laptop Endai kutanga neine simba inonzwisisika £ 549 asi, iine shoma shoma yekuchengetera uye RAM, iwe unofanirwa kuona iyo yakakosha modhi seyakawanda yegore komputa chishandiso - chimwe chinhu chakanyanya kufanana neChbookbook pane Windows Laptop. Kamwe Windows yatora chidimbu chayo, iwe unenge uine shoma shoma nzvimbo yeapplication uye faira yekuchengetedza.
Kufunga kuti iwe unoda chaiyo Windows muchina uine huwandu hunoshandiswa hwekuchengetedza zvine mutsindo zvinoda kuti uende kumusoro kune iyo £ 699 modhi. Izvi zvakasiyana zvinouya ne8GB ye RAM uye 128GB SSD, nepo inodhura kwazvo £ 899 Surface Laptop Go inouya ne8GB ye RAM uye 256GB yekuchengetedza. Iyo yekupedzisira ndiyo yemhando yeMicrosoft yakapihwa ino ongororo.
Yedu yazvino yatinoda mune ino mutengo bracket ndiyo £ 549 Kukudza MashamwariBook 14, kukosha kwakanyanya Windows 10 Laptop ine yakawedzera prosaic kwese-kutenderera kuvaka asi nekukurumidza kuita pondo-ye-pondo, iyo 256GB SSD yekuchengetedza seyakajairwa uye 8GB ye RAM. Microsoft pachayo Surface Go 2 yakachipa zvishoma pane iyo Laptop Go futi (kubva pa £ 499 ine Type Cover kiibhodhi) asi iri diki pane iyo Surface Laptop Go uye haina simba.
HONOR MagicBook 14 - 14 Inch Laptop w / FullView 1080P Screen, All-Day Battery, 65 W Fast Charger, Fingerprint Login & Recessed Camera (AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Imba) Mystic Sirivheri
£ 549.99 Tenga izvozvi
Kune nguva dzose iyo Microsoft Surface Laptop 3, iyo inouya iine yakakura 13.5in kuratidza uye yakafanana kuvaka mhando asi iyo £ 999 base modhi inongouya neyekutanga 128GB yekuchengetedza - hafu yemari inouya ne £ 899 Laptop Go.
Zvinogona zvakare kuve zvakakosha kufunga nezve isiri-Windows muchina kana usiri kufarira idzi dzimwe nzira. Iyo Google Pixelbook Enda Laptop inoyemurika uye ine hupenyu hunoshamisa hwebhatiri asi inouya neyakajairwa yakatsanangurwa (Intel Core m3, 64GB yekuchengetedza, 8GB ye RAM) uye inotanga pa £ 80 kupfuura iyo Surface Laptop Go.
Nyowani Apple iPad (10.2-inch, Wi-Fi, 32GB) - Space Grey (Yekupedzisira Model, 8th Generation)
£ 329.00 Tenga izvozvi
Zvinowanzoitika Apple iPad 10.2in (2020), Yakashongedzerwa neiyo Smart Keyboard Folio, inogadzira inodzora laptop, zvakare, nemitengo inotangira pa- $ 488 yeiyo 32GB modhi kana £ 588 yeiyo 128GB iPad (iwo maviri mitengo anosanganisira iyo keyboard). Iyo yekuratidzira idiki pa10.2in, zvisinei, uye kubatana kune mashoma.
Tenga iyo Pixelbook Go izvozvi kubva kuna John Lewis
Microsoft Surface Laptop Go ongorora: Dhizaini uye maficha
Sezvandambotaura pamusoro, iyo Surface Laptop Go inongoita seSurface Laptop 3 muchimiro uye nekunzwa. Iine chimiro chakajairika-chakaumbwa-chimiro, iyo Surface Laptop 3's chivharo uye keyboard zvakapfekedzwa mualuminium ine yakatsetseka matte kupera uye kuratidzwa Windows logo iri pakati.
Musiyano chete ndewekuti, pachinzvimbo chealuminium yakawanda, hwaro hweLaptop hwapedzwa neyakareruka-inobata epurasitiki, ine pigmented kuti ienzane nemuvara wekhibhodi.
Pakazara zvine hungwaru, zvakashambidzika uye zvinonzwa kusimba zvakakwana kuti vatore kugogodza kwekushungurudzwa kwemazuva ese. Chiedza uye chitete, futi. Kana kutakurika kwakakosha, iri sarudzo yakanaka kwazvo: kuyera 1.1kg uye kuyera 278 x 206 x 15.7mm kana yakavharwa, unogona kuisimudza muhombodo yako yebhegi uye hauzombozviona kuti zviripo.
Uye, zvakadaro, kunyangwe iri diki saizi, iyo 12.4in inoratidzira inonzwa kugadzikana yakakura zvakakwana kuti ishande pazuva rese. Izvo zvinonyanya kudzikira kune yayo 3: 2 factor ratio, iyo inokweretesa iyo kuratidzwa kwakanyanya kupamhamha kunzwa kupfuura 16: 9 inoratidzira ine yakafanana diagonal zviyero. Chokwadi, iyo Surface Go's skrini, kunyangwe ichidomwa kuti diki, iri chaiyo yakafanana urefu nekuratidzwa kwe Honor MagicBook 14's 14in.
Iyo keyboard inonakidza kutaipa uye nepo ini ndichisarudza makiyi ekuti ndive nekumisikidza zvishoma nzvimbo pane dzakafa dzakadzika pano, pane kufamba kwakaringana uye mhinduro yekushushikana-isina kubata kubata typing uye hapana chero nyaya hombe ne marongerwo.
Kune muverengi weminwe yeminwe yakadzamidzirwa mubhatani remagetsi kumusoro kurudyi, kuruboshwe kuruboshwe rweDel kiyi, inoshanda nemazvo. Zvinoshamisa, Microsoft inosiya izvi kubva pane yakachipa mhando. Iwe unowanawo a Windows Mhoro-inoenderana 720p webcam inoiswa mukati mebezel pamusoro pechidzitiro. Haisi yakaipa webcam asi haisi iyo yakanakisa yandakashandisa, chero, uye kwete chigamba pane iyo iwe yaunowana pane iyo Surface Go piritsi.
Iyo yekubata padhi inoshanda pasina nyaya, zvakadaro, uye kutenderedza kumucheto kweye laptop ndeinonzwisisika sarudzo yemachiteshi. Kumucheto wekuruboshwe kune yakazara-saizi Type A USB chiteshi, USB-C 3.2 Gen 2 chiteshi (kusvika ku10Gbits / sec) uye ne3.5mm headset jack. Kumucheto wekurudyi, magnetic Surface Connect port inoita kuti ubate charger yako.
Pota uchitenderera zvese nekubatana kweWi-Fi 6, nerubatsiro rweIntel's 160MHz AX201 chipset, uye une laptop yemazuva ano yakanyatsobatana. Pane zvishoma kwazvo zvekunyunyuta pamusoro pechinhu chinoshanda pano.
Microsoft Surface Laptop Go ongorora: Ratidza uye odhiyo
Kunze kwekunzwa wakapamhama nehukuru hwayo, iyo Microsoft Surface Laptop Go's 12.4in PixelSense touchscreen iri, nehunyanzvi, yakanaka kwazvo. Kazhinji, ino inzvimbo iyo bhajeti malaptop anoderedza mutengo - iyo Honor MagicBook 14's skrini iri drab uye isinganetsi - asi kwete pano.
Iyo resolution ndeye 1,536 x 1,024 (148ppi) uye inoenda yakajeka zvakakwana kuti iverengeka mune yakajeka mamiriro. Kuratidzira kwayo kwemavara kunonakidza, futi. Iyo inoratidzira inovhara 91.6% yeiyo sRGB color gamut (kunze kwevhoriyamu ye93.8%) uye kurongeka kwemavara mukati meSRGB inoyemurika paavhareji misiyano yeruvara Delta E ye1.44. Kwete izvozvo chete, asi kutarisa maAngles kwakanakisa uye, neyakaenzana reshiyo ye1,038: 1, pa-screen mifananidzo ine yakawanda dynamism.
Zvese izvi zvinhu zvinoenda pamwechete kugadzira chiratidziro chiri nyore zvinoshamisa paziso uye chakakosha margin chakakwirira kune iyo Honor MagicBook 14. Zvekureva, iyo Honor's skrini yaingokwanisa chete kuburitsa 57% yeiyo sRGB color gamut uye inoratidzika kunge yakasviba se mhedzisiro.
Kana zviri odhiyo, izvo hazvina kushata, kana, pamwe nelaptop's yepasi-khibhodi masipika achirovera kunze kurira padanho rakashamisa vhoriyamu. Ivo vanobata padivi re tinny, sezvaungatarisira kubva kune chero mutauri weLaptop asi unoteererwa zvakakwana kune ma podcast, audiobooks uye vhidhiyo mafoni.
Microsoft Surface Laptop Go ongorora: Performance
All Surface Laptop Go mamodheru anoshandisa zvakafanana Intel 10th-Gen Core i5-1035G1 CPU asi iwe unogona kutarisira mashandiro kuti asiyane zvakanyanya pakati pezasi-kumagumo Surface Laptop Go uye iwo maviri mamodheru pamusoro payo. Izvi zvinodaro nekuti muchina webhajeti unoshandisa 64GB eMMC drive uye ine chete 4GB ye RAM, nepo vamwe vachikurumidza SSD kuchengetedza uye 8GB ye RAM.
Chero nzira, hausi kutarisa kwekuvhuvhuta kuita pano, kunyangwe neiyo yekumhanyisa kumisikidza yakayedzwa kuongorora uku. Ipo iyo Surface Laptop Go ichikurumidza uye ichishandiswa kupfuura mazhinji pasi- £ 500 Windows malaptop, inokanda yakati wandei kuseri kweiyo Honor MagicBook 14, iyo inoshandisa AMD Ryzen 5 3500U CPU:
Iyo 256GB SSD mukati medu ongororo Surface Laptop Go haisi iyo inokurumidza chinhu, chero, uye zvakare, inononoka kupfuura iyo SSD muRukudzo - iwe zvechokwadi haudi iyo 64GB eMMC drive mune yakachipa modhi nekuti ichave inotononoka kupfuura izvi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti zvese izvi zvinoreva kuti Surface Laptop Go inoteerera, inoshandisika mushini. Izvo hazvingasimukire kune rinorema-basa rekushandisa - yakakwira resolution vhidhiyo kupa uye mitambo iri kunze. Asi inobhururuka nekukurumidza uye, kune mazhinji ezuva nezuva mabasa, padanho rekuita pane kupihwa rakanyatsonaka. Chokwadi, iyo Surface Laptop Go haisi yese inononoka kupfuura inodhura Microsoft Surface Laptop 3.
Izvo zvinoenda kune hupenyu hwebhatiri futi, izvo zvakare zvinopfuura zvinogamuchirwa pamutengo uyu. Iyo haigone kurova yakanyanya kunaka pane iyi kuverenga - iyo Google Pixelbook Go ndiyo yakarebesa-inogara bhajeti laptop yatakaedza, inogara zvakapetwa zvakapetwa kaviri pakureba pakuenzanisa. Nekudaro, kuma7hrs 27mins, iyo Surface Laptop Go hupenyu hwebhatiri hwakatonyanya kushata kupfuura iyo Honor MagicBook 14 uye Surface Laptop 3 uye zvishoma zvirinani pane iyo Surface Go 2:
Microsoft Surface Laptop 3 ongororo: Mutongo
Kutorwa muhuwandu, pane zvakakanganisika zvishoma zvinoitwa neMicrosoft, kunyanya mune yakachipa kwazvo £ 549 modhi. Iyi ilaptop iwe yaunofanirwa kufunga chete kana iwe wakagadzirira kuibata seChannelbook - kuwana gore-based apps uye kunyanya kuchengeta mafaira online.
Nezvikonzero izvi, ini ndichiri kukurudzira iyo Honor MagicBook 14 pamusoro uye pamusoro peiyo Surface Laptop Go kune avo vanotsvaga yepamusoro-mhando laptop pamutengo wekutenga. Iyo MagicBook inokurumidza, inoshanda zvakanyanya laptop kupfuura iyo £ 549 Surface Laptop Go uye ingori zvishoma zvishoma inotakurika.
Kune, zvisinei, mativi maviri kune ino nhaurwa uye anodhura eSurface Laptop Go mamodheru anoita manzwiro akawanda, kunyanya ekumusoro-kumagumo £ 899 kumisikidzwa.
Pamutengo uyu, iyo Surface Laptop Go's yese-yakatenderera mhando inoiisa mukubatana nemalaptop akadai seApple MacBook Air, Samsung Galaxy Book Ion uye yeMicrosoft Surface Laptop 3 - uye inopfuura kubata kwayo.